DEG DEG :Jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq oo war aan laga fileyn kasoo kordhay & Isu socodka Gaadiidka Ciidamada… – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA DEG DEG :Jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq oo war aan laga fileyn kasoo kordhay & Isu socodka Gaadiidka Ciidamada…
Posted on July 13, 2018 by admin | 0 Comments
Wararkii ugu dambeeyey ee Warsidaha Puntlandfm.com uu ka helayo jiidaha hore ee dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in la hakiyey dhamaanba isu socodka gaadiidka dagaalka ciidamada ku jira furimaha hore isla markaasna heegan la galiyey ciidamada labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland.
Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa ku dhawaaqay in uusan jiri doonin gaadhi dagaal iyo ciidamo micno daro u aadi doona magaalooyinka ku teedsan deegaanada la isku hor fadhiyo, waxaana amar buuxa lagu siiyey ciidamadu in ay kusii sugnaadaan jiidaha dagaalka isla mar ahaan taana uusan banayn karin askarna goobta uu kaga jiro difaaca.
Ciidamada Puntland ayaa hada isku diyaarinaya dagaal culus oo ay ku qaadaan ciidamada Somaliland halka ciidamada Somaliland saraakiishoodu ay iyana fartay in ay xoojiyaan difaacyadooda kana bixin furimaha dagaalka.
Xaalada deegaanka Tukaraq ayaa maalmihii ugu dambeeyey kacsanayd waxaana xili walba la filan karaa dagaalo culus oo ka dhex qarxa labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland, waxaana iminka socda dhaq dhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan kuwaas oo sababi kara dagaalo dhex labada dhinac.
DEG DEG:- War deg deg ah oo Naga soo Gaaray Tukaraq & Jiidaha dagaalka oo …